Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada aan joogsiga lahayn ee Toronto ilaa Dublin ee WestJet hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Irland News Breaking News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyadan ayaa sii xoojin doona xiriirka ganacsi iyo waqtiga firaaqada ee u dhexeeya Canada iyo Ireland waxayna kordhin doontaa isku xirnaanta labada suuq ee muhiimka ah.
Duulimaadyada cusub ee xilliyeedka ee aan joogsiga lahayn ayaa lagu wadaa inay shaqeeyaan afar jeer toddobaad kasta, laga bilaabo May 15, 2022.
Adeegga daah -furka WestJet ee u dhexeeya Toronto iyo Dublin wuxuu ku shaqayn doonaa diyaaradda WestJet ee Boeing 737 MAX.
Duulimaadyadu waxay ka muuqan doonaan qolka cusub ee dib -u -habaynta ee shirkadda, taas oo bixisa heerar cusub oo asturnaan iyo raaxo.
Laga bilaabo guga, WestJet waxay siin doontaa martida fursado badan oo ay kaga soo xirmi karaan xarunta diyaaradda ee Toronto oo leh duulimaadyo cusub oo u dhexeeya Toronto iyo Dublin. Duulimaadyada cusub ee xilliyeedka ee aan joogsiga lahayn ayaa lagu wadaa inay shaqeeyaan afar jeer toddobaad kasta, laga bilaabo May 15, 2022 waxayna sii kordhayaan maalin kasta illaa Juun 2, 2022.
John Weatherill wuxuu yiri: “Markay dalabka sii kordhaan, waxaan ognahay in dadka socotada ah ay raadinayaan xulashooyin ku habboon oo la awoodi karo si ay ugu safraan Kanada iyo Yurub. WestJet Madaxa Sarkaalka Ganacsiga. “Markaan sii wadno inaan xoogga saarno sidii aan u ballaarin lahayn shabakadeena Toronto xarun aan ku bixinno 33 goobood oo caalami ah, duullimaadyadan ayaa sii xoojin doona xiriirka ganacsi iyo waqtiga firaaqada ee u dhexeeya Canada iyo Ireland waxayna kordhin doontaa isku xirnaanta labada suuq ee muhiimka ah. ”
Iyada oo duulimaadyadu bilaaban doonaan gugan, WestJetadeega caleema saarka ee u dhexeeya Toronto (YYZ) iyo Dublin (DUB) waxay ku shaqayn doonaan diyaaradda WestJet ee Boeing 737 MAX. Duulimaadyadu waxay ka muuqan doonaan qolka cusub ee dib -u -habaynta ee diyaaradda, kaas oo bixiya heerar cusub oo asturnaan iyo raaxo, oo ay ku jirto waayo -aragnimo wax -ku -beddel oo la -hagaajiyay iyo qaab -dhismeedka 2X2 ballaaran.
Faahfaahinta adeegga cusub ee xilliyeedka WestJet ee u dhexeeya Toronto iyo Dublin:
wadada Frequency Ku bilow Date departure imaanshaha
Toronto - Dublin 4x toddobaadle Waxaa laga yaabaa 15, 2022 9: 10 wakhti dambe 8:45 subaxnimo (+1)
4x toddobaadle ah Oktoobar 1- Oktoobar 28, 2022
Dublin - Toronto 4x toddobaadle Mwaxay ahayd 16, 2022 10: 05 am 12: 40 galabnimo
4x toddobaadle ah Oktoobar 2 - Oktoobar 29, 2022
WestJet Airlines Ltd. waa diyaarad Canadian ah oo la asaasay 1994-tii oo shaqadeeda bilowday 1996. Waxay ku bilaabatay qiimo jaban oo lagu beddeli karo shirkadaha waaweyn ee dalka ee tartamaya. WestJet waxay siisaa adeeg hawleed qorshaysan iyo kiraysi ah in ka badan 100 goobood oo ku yaal Kanada, Maraykanka, Yurub, Meksiko, Bartamaha Ameerika, iyo Kariibiyaanka. Xarunta dhexe ee diyaaradda waxay ku taallaa agagaarka Madaarka Caalamiga ah ee Calgary.